Roohingiyaa UPDATE - NuuralHudaa
Last updated Feb 26, 2018 22
Ejensichi muslimoota Rohingiyaa kanneen duguuggaa sanyii waraana Miyanmaariif
hordoftoota amantaa Budihaa jalaa lubbuu isaanii baraaruuf, gara Baangilaadishiitti baqatuun Kaampii Kooks Bazaaritti argamaniif manneen 1000 ijaaruuf karoora isaa kan xumure tahuu ibse.
Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ejensiin gargaarsa daa’immanii (UNICEF) ibsa guyyaa hardhaa baaseen, Daa’imman Muslimoota Rohingiyaa kumaatamaan lakkaayaman, kanneen ajjeechaa waraana mootummaa Miyanmaar jalaa baqatuun Baangilaadiish keessa jiran, ji’a jaha walfaana deeggaruuf doolarri miliyoona torbatamii jaha ($ 76,000,000) kan barbaachisu yoo tahu, kana keessaa hanga ammaatti 7℅ qofti kan argame tahuu ibse.
UNICEF deeggarsi maallaqa dabalaataa hatattamaan yoo hin godhamin, baqattoota Rohingiyaa kan Baangilaadiish seenan deggaru kan dhaabu tahuu akeekachiise.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii (UN) baqattoota Rohingiyaa Baangilaadiish seenan kanneeniif, September 2017 hanga February 2018tiitti doolarri miliyoona dhibba Afurii fi Sodoomii Afurii kan barbaachisu yoo tahu, gargaarsi hanga ammaatti biyyoota adda addaa irraa argame doolara Miliyoona dhibba tokkoo fi jaha( $106,000,000) qofa tahuu ibse.
UN ,waraanni mootummaa Miyanmaar ajjeechaa ,gudeedaan shamarran irratti akkasumas tumaa daa’imman muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatuu raagaan kan jiru tahuu fi gocha kanaas duguuggaa sanyiiti jechuun balaleefate.
Turkiyaan gargarsa doolara Miliyoona Shantamii Afur Muslimoota Rohingiyaatiif gumaachuu karoorsite.
Gabaasni Ministira Fayyaa Turkiyaa irraa guyyaa hardhaa bahe, Mootummaan Turkiyaa muslimoota Rohingiyaa kan duguggaa sanyii waraana mootummaa Miyanmaar jalaa lubbuu isaanii baraaruuf, kutaa Rakhiiynii irraa baqatuun Baangilaadiish seenaniif, deggarsa meeshaalee adda addaa doolara Miliyoona 54tti tilmaamamu godhuuf tahuu mul’isa.
Ministirichi gargarsa kana karaa qondaala Tao’annaa Ittisa balaa Mootummaa Turkiyaatiin kan godhu tahuu miidiyaaleef ibse.
August 25 irraa kaase muslimoonni Rohingiyaa 500,000 ol, qe’ee isaanii irraa buqqa’uun kan Baangilaadiish seenan tahuu, gabaasni Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii irra bahe ni mul’isa.
Ministiri hajaa alaa Baangilaadiish Abuul Hasan Mahmuud Alii
” Duguuggaa sanyii waraanni Mootummaa Miyanmaar fi dursitoonni amantaa Budhaa, dhiheenya kana Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwataniin lubbuun namoota 3000 ol badeera” jedhe.
Muslimoota Rohingiyaa Baangilaadishitti baqataniif deeggarsi guddaan kan barbaachisu tahuu ibsame.
Lakkoofsi Muslimoota Rohingiyaa ajjeechaa fi dararaa waraana mootummaa Miyanmaar baqatuun Baangilaadish seenanii 436,000 gahee jira. Muslimoota Rohingiyaa biyya isaanii irraa baqatan kanaaf deeggarsi nyaataa, uffataa fi iddoo jireenyaa guddaa ta’e, hawaasa Addunyaa irraa kan eegamu tahuu Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti hoogganaan Ejensii baqattootaa (UNHCR) ibse.
Komishinarri Ejensii baqattootaa Filipoo Grandii guyyaa hardhaa Kaampiilee naannawa Kooks Bazaar kan kibba Baangilaadishitti argaman kan daawwate yoo tahu, Rakkoon cimaan jiraatu dubbate.
Grandin daaw’annaa booda ibsa midiyaalee kennen:
“Hanqinnooleen nyaataa, bishaan qulqulluu, iddoo jireenyaa fi tajaajila Fayyaa guddatu jira; kana furuuf immoo deeggarsi guddaatu hawaasa Addunyaa irraa eegama” jedhe.
Komishiinarri Ejensichaa akka jedhetti, guyyoota muraasaa asitti lakkoofsi baqattoota gara Baangiladish seenanii waan xiqqaataa dhufe fakkaata; haata’u malee ammas namoonni lakkoofsaan heddu ta’an Miyanmaar irraa gara Baangilaadish seenaa akka jiran hime.
Qondaaltonni Baangilaadish gama isaaniitiin akka jedhanitti, baqqattoota galmeessaa kan jiran yoo tahu, baay’inna baqattootaa irraa kan ka’ee hamma barbaadamu kan hindeemin tahuu ibse. Kun immoo gargaarsaa barbaachisaa ta’ee seeraan namoota kanaaf godhuu irratti rakkina kan uume tahuu ibsan.
Mootummaan Miyanmaar baqattoota waraqaa eenyummaa biyya isaa hinqabne, akka lammii biyyattiitti kan hin ilaalleefi haala kamiinuu gara biyyaatti kan hin deebfne tahuu torbaanuma kana keessa ibsuun isaa niyaadatama.
Dhaabbanni Mootummoota gamtoomanii Lakkoofsi baqattoota Rohingiyaa gara Bangiladishi seenanii 310,000 ol gahuu beeksise.
Dubbi himtuun ajensii baqattoota (UNHCR) Aadde Aslam Khan hagayya 25/2017 irraa eegalee Muslimoonni Rohingiyaa duguuggaa sanyii jalaa baqatuun daangaa Baangiladish seenan 313,000 kan gayan tahuu Anaadooluu Niiwusiif himte.
Dhaabbataa mootummoota gamtoomanitti Komishinarri ol’aanaan mirga namoomaa Ziyaa Ra’id Al-Hussen gama isaatiin, mootummaa Miyanmaar gocha hammeenya waraannii biyyattii raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabu akeekkachiise. Gochii Miyanmaar keessatti waraanni biyyatti muslimoota Rohingiyaa irratti raawwataa jiru, “fakkeenya duguuggaa sanyii kitaaba baranoota irratti katabamuu malu” jechuun ibse.
Yeroo amma kana mootummaan Miyanmaar duguuggaa sanyii kana akka dhaabu dhiibbaan gama hedduun kan irratti dhiyaataa jiru yoo tahu, chaansilariin Jarman gama dubbi himtuu isiitiin “Mootummaan Miyanmaar duguuggaa sanyii Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatu hatattamaan akka dhaabu waamicha dabarsina” jette.
July 7, 2022 sa;aa 5:18 am Update tahe